Acoustic Panel vagadziri uye vanotengesa - China Acoustic Panel Factory
Mucheka acoustic pani
Wooden acoustic pani
Polyester acoustic pani
Matanda emvere dzemapuranga
Ruzha Runotora Zvinhu
Misa yakatakura vinyl
Musuo usina kutinhira
Mhepo Inodzivirira Zvinhu
Makirasi & Zvikoro
Hotera & maresitorendi
Ruzha kuputira ruzivo
Acoustic kurapwa mabass musungo
Acoustic bhodhi, isina mutsindo bhodhi, kurira kupatsanurwa pa ...
Yakarembera acoustic mapaneru, acoustic pani yemutengo, mutsindo ...
Ceiling makore, yakaturikwa acoustic pani
Wood inoparadzira studio
Wood shinda kuputira, huni mvere acoustic pani, huni ...
Misa yakatakura vinyl 2lb, vinyl chipingamupinyi
Acoustics chipingaidzo, acoustic machira, acoustic gumbeze
Kero: Industrial Zone, BaoYunda Center, Xixiang Road, Xixiang Town, Baoan District, Shenzhen, China.
Nhandare Kamuri Perforated acoustic pani
Iyo perforated acoustic pani yakaitwa yemhando yepamusoro MDF borad uye ine yakatanhamara yezvakatipoteredza, murazvo unodzora uye isina mvura mabasa. iwo akasiyana mavara uye kupedzisa choise inogona kugutsa zvese zvevatengi acoustic uye kududzira zvinodiwa. uchienzaniswa neiyo grooved acoustic pani, iyo pendi yemapuranga pani ine zvirinani kukanganisa pakurwisa.
Eco Ceiling Uye Wall Acoustic pani yehuni
Iyo Acoustic pani huni inogadzirwa yemhando yepamusoro MDF borad uye ine yakasarudzika nharaunda, murazvo unodzora uye isingaite mabasa. iwo akasiyana mavara uye kupedzisa choise inogona kugutsa zvese zvevatengi acoustic uye kududzira zvinodiwa. uchienzaniswa neiyo grooved acoustic pani, iyo pendi yemapuranga pani ine zvirinani kukanganisa pakurwisa.
Inzwi Inotora MDF yemapuranga mapaneru
Iyo MDF yemapuranga mapaneru inogadzirwa yemhando yepamusoro MDF bhodhi. Zvinoenderana neyevatengi acoustic uye yekushongedza chinodikanwa, yedu yakakwenenzverwa huni acoustic pani inogona kushongedzwa neyakajeka nharaunda, murazvo unodzora uye isingaite basa, kunyange inogona nemhando dzakasiyana uye kupedzisa sarudzo.
Wood siringi pani, acoustic huni
Matanda esiringi emadziro, acoustic huni ndeyemberi slot, yakatsemura musana weforforated zvinhu resonance pani iyo ine yakanaka yakaderera-frequency acoustic performance. Inoshandiswa zvakanyanya mukushongedza kweimba uye vekutengesa hwindo vanoratidza. Nepaneru iyi, tinogona kurarama munzvimbo yakafanana chaizvo inogona kutiunzira zvinofadza. Imba ine paneli iyi inoratidzawo kuravira kwepamusoro kwemuridzi.
Yemukati yekushongedza mdf Timber acoustic pani
Matanda acoustic pani ndeyemberi slot, yakatsemura musana weforforated zvinhu resonance pani iyo ine yakanaka yakaderera-frequency acoustic performance. Inoshandiswa zvakanyanya mukushongedza kweimba uye vekutengesa hwindo vanoratidza. Nepaneru iyi, tinogona kurarama munzvimbo yakafanana chaizvo inogona kutiunzira zvinofadza. Imba ine paneli iyi inoratidzawo kuravira kwepamusoro kwemuridzi.
Wood shinda kuputira, huni mvere acoustic pani, huni shinda
Wuru shinda kuputira, huni mvere acoustic pani, huni shinda ikozvino mutungamiri mune eco-hushamwari, yakakwira- mashandiro, anodhura- anoshanda acoustical-pani zvigadzirwa zvigadzirwa. Aya matanda fiber acoustic mapaneru anoita mushe nekutora ruzha uku uchidziisa zvine simba; zvakasikwa, acoustic mvere iri nyore kugadzira; uye mapaneru anowanikwa muhukuru hwakawanda uye nemavara akasiyana anogona kugadzirirwa kukodzera chero chero shongedzo.
Aya eco- hushamwari cementitious matanda- fiber mapaneru kwete chete anomutsa imba ine dhizaini dzakasiyana, asi acoustic huni mvere dzemapango zvakare anoderedza maekisheni uye kudzokororazve kuburikidza nekunzwa kwezwi. Mabhodhi emakushe ehuni anogona kushandura iyo aesthetics uye acoustics yechero nzvimbo yemukati.
Danda remvere samende bhodhi, huni shinda bhodhi, matanda emvere dzemakwai
Wood shinda samende bhodhi, huni shinda bhodhi, huni shinda matombo anogadzirwa kubva ku65% echisikigo poplar huni fiber yakasanganiswa ne 35% portland simenti, iyo ine maficha ezvakanaka kurira uye kushongedza. Iyo yazvino yekushongedza dhizaini yematanda simende acoustic pani inogutsikana nevanhu vazhinji. Pane mhando yerudzi inogona kusarudzwa, Vinco kadhi yemavara inopihwa kunongedzo yako. Wooden simende acoustic pani inowanzoshandiswa kureva bhuku horo, yekuratidzira horo, musangano imba.
Kushongedza 3d emadziro epaneru, acoustic inodzivirira, acoustic madziro
Iyi Acoustic pani inogadzirwa ne100% polyester fiber. Ichi chinyorwa chinogona kuve 100% chinogadziriswazve. Yakasimba, iri nyore kushandisa, nyore kugadzirisa, inogona kuitwa kuita akasiyana siyana zvichienderana nezvinodiwa zvakasiyana. Ruzivo runotevera rwakajairwa acoustic pani kubva kwatinogona kucheka chero gadziriso yechimiro nekuda kwezvinodiwa nemutengi.
Acoustic pani inodzivirira, acoustic madziro mataira, acoustic madziro mapaneru
kudzikisira ruzha nehurefu hwakakwira
polyester fiber yakaitwa sekokokoni donje dhizaini neepamusoro-tech inopisa yakanyanya kuyerwa izwi rekutapa coefficient iri kusvika ku0.9.
zvakasikwa zvinhu zvemavara zvinowanika zvemhando dzakasiyana dzemavara emhando yakapusa yekushongedza maitiro.
Inopinza mapaneru, 3d acoustic pani, inovaka zvinhu, isina mutsindo madziro emadziro
Ruzha rutapudzo pamwe yakakwirira arambe achirema.
Polyester faibha yakagadzirwa se cocoon donje dhizaini neepamusoro- tekinoroji inopisa yakanyanya kuyerwa izwi rekutapa coefficient iri kusvika ku0.9.
Natural Natural machira anowanikwa akasiyana emhando dzemazuva ano mavara zvakapusa maitiro ekushongedza.
Acoustical huso, 3d emadziro epaneru, acoustic mataira, acoustic yekumhanyisa pani
Acoustical huso, 3d emadziro epaneru, acoustic mataira, acoustic yekumisikidza pani inoitwa kubva ku100% polyester, neyetsono kubaya kugadzira. Maitiro ekugadzira ari epanyama uye eco-hushamwari, hapana mvura yemarara, emhepo, marara,. hapana chinonamira, Iyo porous hunhu hweacoustic pani inoita kuti inzwike seyakatora & yekupisa inodzivirira.
Yedu PET acoustic mapaneru Asina chepfu, asiri e-allergenic, asiri-anogumbura uye haina formaldehyde anosunga uye ane akanyanya kurira (NRC: 0.85).
Acoustic kamuri, machira madziro emapaneru, machira akaputirwa acoustic mapaneru, acoustic yezwi
Acoustic kamuri, machira emadziro mapaneru, machira akaputirwa acoustic mapaneru, acoustic yezwi ine yakafara kurira kwekutora masitepisi uye yakakwira acoustic yekumwa coefficient, uye zvirinani kurira kwekutora maitiro kune yakaderera, yepakati uye yakakwira frequency. Yakakwira tembiricha kuramba, kudziya-nyungudika kusagadzikana, uye kuchembera, kuramba ndiyo yakakosha mhando hunhu hwejira re acoustic pani. Aya maitiro anowana akasiyana siyana ekushandisa ejira acoustic pani.
Chiyero chekudzivirira moto chinosvika padanho renyika B, uye kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza ndiyo nyika E1 nhanho. Nemaitiro akanaka ekuchinjika, jira acoustic pani inogadzirwa nezvinhu zvakapfava.
Shenzhen Vinco Inodzivirira zvigadzirwa Co., Ltd. iri nyanzvi soundproofing zvinhu kwemakore akawanda uye zvinopa R & D, kugadzirwa, rokutengesa uye pashure-okutengesa basa zvigadzirwa.